Ezigbo Ndị Ahịa Tech: Kwụsị Atụmatụ Ahịa na Uru | Martech Zone
Thursday, January 21, 2010 Tọzdee, Disemba 18, 2014 Douglas Karr
Izu ole na ole gara aga, ejiri m nwayọ na-agbakwunye ngwa ahia gaa na saịtị ọhụrụ. Otu n'ime ihe karịrị m chọpụtara bụ na teknụzụ ụlọ ọrụ n'anya na-atụmatụ atụmatụ na-eleghara kpamkpam ahịa uru.
Indị ihe atụ bụ ntụnyere nkeHootsuite vesos CoTweet ™:
Ahịa CoTweet na ibe obibi ha na-akpali ndị uru nke iji ikpo okwu:
CoTweet bụ ikpo okwu na-enyere ụlọ ọrụ aka iru ma tinye ndị ahịa na-eji Twitter.
Nyochaa akara gị - Gee ntị maka mkparịta ụka gbasara ngwaahịa gị, ụdị, ụlọ ọrụ na ndị asọmpi. CoTweet bụ Twitter gị "Usoro ịdọ aka na ntị mbido"
Soro ndị mmadụ na ụlọ ọrụ gị - Kee ọrụ nke ịnọ na ọrụ. Kpatụ amamihe nke ndị mmadụ gafee mpaghara ọrụ dịka ahịa, PR na ọrụ ndị ahịa. Kenye ọrụ ma soro ndị na-eso ụzọ.
Lekwasị anya na mkparịta ụka dị mkpa - Mara mgbe ịkwesịrị ịbanye. Sochie mgbanwe gị site na njikwa ikpe dị mfe. Hazie oge iji mee ọkwa ụlọ ọrụ.
Debe akara gị HUMAN - Tinye aha gị ozugbo na mmelite gị iji mata onye na-ekwu okwu ma debe mkparịta ụka nkeonwe.
Izu ahia ulo Hootsuite bu ihe gbasara atụmatụ nke ikpo okwu ha:
Netwọk mmekọrịta ọhụrụ! - Jikwaa otutu Twitter, Facebook, LinkedIn ma ọ bụ Ping.fm akaụntụ na otu mfe iji interface.
iPhone App ọhụrụ! - dutọ oge tweets, tinye listi, na soro stats na HootSuite iPhone ngwa
Track Statistics - Mmetụta ndị enyi gị, onye isi gị, ma ọ bụ naanị gị onwe gị na ọnụ ọgụgụ njikọ anyị na visualizations.
Twitter depụtara ọhụrụ! - Mbubata gị ẹdude Nsuso ma ọ bụ ike ọhụrụ na jikwaa ha si n'ime HootSuite
Arụ Ọrụ Otu - HootSuite na-eme ka ọ dị mfe ijikwa ọtụtụ ndị ọrụ karịrị akaụntụ Twitter dị iche iche.
Nlekota oru - Chọpụta ihe ndị mmadụ na-ekwu gbasara akara gị ugbu a.
Nlere Onwe - Hazie iyi Twitter gị na taabụ na ogidi. Hazie nhazi ahụ otu ị si chọọ ya.
Schetọ oge Tweets - Nye ndị na-eso ụzọ gị nri na-edozi ahụ n'oge ọ bụla site na iji usoro nhazi oge HootSuite.
Embed Columns - Jidere koodu HootSuite ka ọ dị mfe itinye ogidi ọchụchọ na weebụsaịtị gị!
Naanị otu ugboro kaHootsuite kwuru uru… ma ọ bụ ka “Mmetụta onye isi gị”. N'ezie? O bu ya kpatara m ji were ikpo okwu gi? Echere mHootsuite nwere ngwaahịa dị ịtụnanya, mana ha kwesịrị ịkụziri atụmanya na ihe kpatara ha ji bụrụ "Ọkachamara" nhọrọ mgbe ọ na-abịa na ụlọ ọrụ Twitter n'elu ikpo okwu. Na nke ọ bụla n’ime atụmatụ ha, jụọ ajụjụ bụ́ “N’ihi Gịnị?”… N’ihi gịnị? Gini mere iji lelee akara m? Kedu ihe kpatara ị ga - eji dee tweets? Kedu uru ndị ụlọ ọrụ ahụ bara?
Emehiela m, a ga - enwe ndị na - azụ ahịa aha ha ga - achọ atụmatụ ndị nwere ike inye gị ngwụcha asọmpi ahụ - mana ekwesịrị ịkọwa ha nke ọma na peeji nke Akụkụ dị mfe ịchọta ma gụọ. Ekwenyere m na chaatị dị iche iche na-arụ ọrụ kacha mma.
Ibe obibi gị na ọdịnaya ahịa gị kwesịrị ịdabere na uru nke iji ikpo okwu gị. Debe atụmatụ na ibe atụmatụ!
Tags: uruUgboro abụọatụmatụhootsuitemarketingonline ahịa
Douglas, kwuru nke ọma. Echiche a bụ isi, mana a na-elegharakarị ya anya.
M na-arụ ọrụ kwa ụbọchị n'ji n'ahịa ibu-igbe Jeriko, n'ụzọ dị ukwuu na edemede na-abụghị foosu zụọ, na nnọọ nta ọdịiche dị n'etiti mpi na ngwaahịa.
Were ahịa dị ka ihe atụ. Ọtụtụ ụlọ ọrụ ga-ebupụta atụmatụ ha; aluminom etiti, nnukwu ikpo okwu nzọụkwụ, na otu aka mkpọchi. Ọ bụ ezie na ha kwesịrị ịzụ ahịa na ọ bụ uru; fechaa, ala & anụ, na mfe iji.
Ọ bụ echiche dị mfe, mana ọ na - arụ ọrụ nke ọma maka ụdị azụmaahịa niile na / ma ọ bụ ahịa.
Jenụwarị 21, 2010 na 4:46 PM
O yiri ka ndị na-ere ngwaahịa na-adazi “teknụzụ ọhụụ ọhụụ” ha hụrụ n’anya nke na ha chefuru kpamkpam na onye ọrụ njedebe anaghị echebara ya echiche.
Enwere ihe efu n'ọtụtụ azụmaahịa ọgbara ọhụrụ. Ha kwesiri iti mkpu mgbe niile "Lelee ihe m nwere ike ịme", kama ịjụ, "olee otu m ga - esi nyere gị aka?"
Nke a bụ nnukwu ọkwa. Daalụ maka ịkekọrịta ihe atụ ndị a.
Jenụwarị 21, 2010 na 10:23 PM
Gregory, ị nweghị ike ikwu ya karịa. Na m na ikpe mara nke otu mmehie! M na nso nso ulo oru Marketing Tech mgbere na ajụjụ mbụ si enyi Jim Brown bụ, "Gịnị ka m na-eji ya maka?" Doh! Enwebeghị m verbiage ahụ ziri ezi mana ọ bụ eziokwu!
Jenụwarị 21, 2010 na 10:25 PM
Da dị ka isi ihe dị iche maka azụmahịa gị nwekwara ike ịbụ gị, Mark! Ọtụtụ ụlọ ọrụ anaghị etinye ikike ha n'elu - mana nke ahụ bụ ihe ụlọ ọrụ na-azụ ahịa na-elebara anya nke ukwuu!
Douglas, ị bụ onye isi, kpọrọ ihe. M na-agụ nke a site n’oge ruo n’oge, ọ bụghị kpọmkwem ọrụ m bụ isi, mana m na-ahụkarị post na-akpali akpali, dị ka nke a. Daalụ na ezigbo ọrụ!
DaveO si HootSuite
Jenụwarị 22, 2010 na 6:18 PM
DaveO ebe a - onye ohuru Community Wrangler na HootSuite - na-ekwu okwu iji kwuo na ị na-ekwu nnukwu okwu. N'ezie ọ dị mfe maka ụlọ ọrụ na-ewu ụlọ ọrụ iji hụ injinia n'anya ma leghaara ọnọdụ ụwa anya maka iji ya - nke a bụ eziokwu n'oge mbido mmalite mgbe ejiri ike niile na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ nke atụmatụ na ihe aga-eme.
M sonyeere HS mgbe m jiri ngwá ọrụ maka mgbasa ozi mgbasa ozi ndị ọzọ ka ịmara uru ya nke ọma. Ka m biri ebe a, ị ga-ahụ ọtụtụ akwụkwọ agụmakwụkwọ na omume kachasị mma iji gosipụta uru ya, ma gosipụta atụmatụ ejiri nweta uru ndị ahụ.
Nọgide na-ele anya ịhụ ka anyị si agbanwe na ekele maka ịgbasa akụkọ anyị. Enwere m ike ping m @daveohoots na echiche ọ bụla ma ọ bụ echiche ọ bụla.
PS Maka ndị ọzọ gbasara m (ihere amaghị m ;-)), biko gaa na:
Jenụwarị 22, 2010 na 10:57 PM
Ekele DaveO maka igwu ohuru! Na-arụ ọrụ maka ụlọ ọrụ nwere ngwaahịa dị ịtụnanya. Enwere m mmasị na ngwa iPhone gị ọkachasị, ekwere m na ọ ga-aka mma na ahịa. Enwere m olile anya na ị nwere ike ịnweta ọkwa a na ndị otu na-ere ahịa weebụ gị, ekwenyere m na ọ ga - enyere gị aka melite ịbanye gị na ahịa ụlọ ọrụ ahụ.
Daalụ maka ịpụta na ịzaghachi - ọ na-ekwu ọtụtụ ihe banyere HootSuite! 😀
Jenụwarị 22, 2010 na 10:58 PM
Daalụ nke ukwuu Guillem! Ka m na-enyocha ngwaahịa ndị a, echere m na ọ bụ trul
Daalụ nke ukwuu maka ụdị okwu ahụ, Guillem!